२०१८ मा कुनकुन सेलिब्रेटीका सम्बन्ध टुटे ? – Hamrofm
Home / Entertainment / २०१८ मा कुनकुन सेलिब्रेटीका सम्बन्ध टुटे ?
Editor Hamrofm January 1, 2019	Entertainment, International, News Leaveacomment 39 Views
गायिका नेहा कक्कड र उनका ब्वाइफ्रेन्ड हिमांश कोहली वर्षको अन्त्यतिर छुट्टिए। उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा प्रेममा रहेको स्वीकार गरेका थिए। हिमांशले सबैका सामु नेहालाई प्रेम प्रस्ताव राखेका थिए। उनीहरूलाई ‘बेस्ट कपल’ भनिन्थ्यो। तर, उनीहरू छुट्टिएका छन्। नेहाले साामजिक सञ्जालमा आफूहरू अलग भएको बताएकी थिइन्।
अभिनेता अर्जुन रामपाल र उनकी श्रीमती मेहर जेसियाले यस वर्ष सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निर्णय लिए। बिहे गरेको २० वर्षपछि उनीहरूले छुट्टिने निर्णय गरेका हुन्। अभिनेता ऋतिक रोशनकी पूर्व श्रीमती सुजन खान र अर्जुन नजिकिएकाले मेहर टाढिन खोजेको बताइन्छ।
अभिनेत्री एली अबराम र भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पाण्ड्याको प्रेम सम्बन्धले यस वर्ष खूब चर्चा पायो। उनीहरूको प्रेम सम्बन्ध जति चाँडो उकालो लाग्यो, त्यति नै छिटो ओरालो झर्‍यो। सार्वजनिक रूपमा आफ्नो प्रेमबारे नबोले पनि उनीहरूको ब्रेकअप भइसकेको बलिउडकर्मी बताउँछन्।
अभिनेत्री यामी गौतम र अभिनेता पुलकित सम्राटबीच प्रेम प्रसंग चलिरहेको थियो। दुवैलाई धेरै पटक सँगै देखियो। तर, यस वर्ष उनीको सम्बन्धको अन्त्य भएको छ। पुलकितले यसअघि अभिनेता सलमान खानकी धर्मबहिनी श्वेता रोहिरासँग सन् २०१४ मा बिहे गरेका थिए। बिहेको एक वर्षमा उनीहरूको पारपाचुके भएको थियो।
Previous ट्रम्पलाई किमको धम्की : जहिले पनि भेट्न तयार छु, तर सम्झौता लागू गर !
Next विद्यार्थीसँग प्रधानमन्त्रीले भने, ‘मैले घाँस काट्ने होमवर्क गर्नुपर्‍थ्यो’